Abavelisi beeNgxowa eziBanzi zeTubular Kwichina iTubular Double Warp Bulk Bag mveliso kunye nababoneleli
1 ton FIBC PP ibhegi enkulu UV ziphathwe unikezelo olukhawulezayo arcade games HT-2
Ubungqina bothuli: i-laminated (10-35g / m²)
Ukushicilela: 1-4S / 1-3C
Ukusetyenziswa: isanti kunye nezinto zokwakha, ezemizi-mveliso kunye nezemigodi, imichiza kunye nezothutho, ezolimo njalo njalo.
Ukuthunga: Ukuthunga okuqhelekileyo, ikhonkco kabini, ngaphezulu kokuthunga
Phawu: ubungqina bamanzi, ubungqina bokuvuza, kunye nothuli-ubungqina
I-Tubular Double Warp Bulk Ingxowa ye-HT-32
Olu luyilo lomzimba lwe-tubular luyakulungeleka njengokhetho lwe-non-liner lwezinto ezintle kunye nezinto ezihlanganisiweyo. Ikwayenye into ebalaseleyo kulwakhiwo lwengxowa yesambuku sophahla esikhulu
Isakhiwo se-tubular sisusa i-seams esecaleni, ngaloo ndlela siphucula ukuhlolwa kunye nokuxhathisa kokufuma. Ibhanti yoyilo lweCross-Corner ilungele ukusebenza kwe forklift.
I-Tubular Double Warp Bulk Ingxowa ye-HT-30
Ulwakhiwo lwee-Tubular lususa iiseams esecaleni, zikhokelela ekuphuculeni ukuhluza kunye nokumelana nokufuma. Ingqokelela yoyilo lweCross-Corner ivumela ukufikelela ngokulula kweforklift.
Iingxowa zekona ezinqamlezileyo zinemilambo ethungelwe emzimbeni welaphu eliphambili, ngamanye amaxesha ilaphu elomeleleyo lokuqinisa ilaphu liyongezwa. Xa imilo yokuphakamisa amakhonkco ibalulekile, ezi ngxowa lukhetho lokuqala. Olu luyilo lunokusetyenziselwa yonke ipateni yokuthunga, ukungena ngaphakathi / uyilo lokuphuma kunye neendlela ezahlukeneyo zokuvalwa.
I-Tubular Double Warp Bulk Ingxowa ye-HT-29
I-Tubular Double Warp Bulk Ingxowa ye-HT-51
Olu luyilo lomzimba lwe-tubular luyinto efanelekileyo njengenketho ye-linerless yezinto ezilungileyo kunye nezixhobo ze-hygroscopic. Ikwayenye indlela ebalaseleyo kulwakhiwo lwebhegi yesininzi esinePaneli ezine.
Iingxowa ezinkulu zeTubular zenziwe nge-polypropylene ephothiweyo kwisangqa. Izinto ezijikelezayo ziyasikwa kubude obunqwenelekayo nasezantsi, ngaphezulu (ukuba kuchaziwe) kwaye imitya ithungwe kumzimba ongenamthungo wengxowa. Xa ulinciphisile inani leemigangatho, iisetyhula zengxowa ezikhulu zeziqhelo zezona zikhetho zilungileyo zokuqulatha umgubo ocolekileyo kakhulu okanye imveliso yegranular. Baye babamba isibonelelo ngokulula kwisebe lokusetyenziswa njengoko imitya iya kuma ngokwabo.
I-Tubular Double Warp Bulk Ingxowa ye-HT-50
Isikhwama sebhubhu esenziwe ngobuninzi senziwe kwilaphu elilukiweyo kwilaphu elijikelezayo, elisikwe kubude obuchanekileyo bokuphakama kwengxowa, ngaloo ndlela kushenxiswa imigca ethe nkqo kwicala ngalinye lengxowa. Uyilo lomzimba we-tubular lufanelekile njengenketho engenamikhono yezinto ezintle kunye nezinto ezihlanganisiweyo. Ikwayenye indlela ebalaseleyo kulwakhiwo lweebhegi zangaphambili ezine.
I-Tubular Double Warp Bulk Ingxowa ye-HT-49
Ubukhulu: ububanzi ukusuka kwi-50cm ukuya kwi-260cm
I-FIBC inokuphinda isebenze kwakhona xa ubomi bayo bokusebenza buphelile, nto leyo eyenza ukuba ibe yimveliso ye-eco-friendly. Ingxowa inezinto eziphakamisayo zokuphakamisa ngenxa yokuba akukho pallets okanye upakisho lwesibini luyafuneka ekuphatheni. Oku kubonelela ngolondolozo olukhulu kwiindleko zothutho kunye nokugcinwa. I-FIBC eprintiweyo ikwasebenza njengebhodi yentengiso ehambayo ekhuthaza iinkampani, iimveliso kunye nokubonisa imveliso ebalulekileyo kunye nokuphatha ulwazi.
I-Tubular Double Warp Bulk Ingxowa ye-HT-46
I-Tubular Double Warp Bulk Ingxowa ye-HT-18
Amanzi: I-liner ye-PE kuyo (ubukhulu: 60-300micron)
Flexible Intermediate Bulk Container, edume ngokuba yiJumbo Bag, Big Bag okanye Bulk Bag sisikhongozeli ikakhulu esenziwe nge-polypropylene esetyenziselwa ukupakisha okuninzi ukusuka kwi-500 kgs ukuya kwi-5000 kgs. Iyakwazi ukuthwala ubunzima bayo ngamawaka ali-1000. Le ndlela yokupakisha isetyenziselwa ukupakisha ukutya, amayeza, iikhemikhali, izichumisi, iisamente kunye nezinye iimveliso. Ingenziwa ngokwezifiso ukuze ihambelane nezicelo ezahlukeneyo njengoko ibhegi eqinisekisiweyo ye-UN isetyenziselwa ukuthuthwa kwempahla enobungozi, ukuhluza ingxowa yobungqina beepowder ezintle kunye nengxowa yokunciphisa i-electrostatic ukunqanda ukuqhuma kothuli.